Sagaalka ayaanlaawe iyo Aabbahood (Qeybtii Kowaad) | Jubbaland Media Online
Sagaalka ayaanlaawe iyo Aabbahood (Qeybtii Kowaad)
Posted on June 23, 2016 in Feat, Opinions // 0 Comments
Cabdirisaaq Ismaaciil Xaashi
Dhaqane Gabanow waa 13, jir Soomaali ah. Wuxuu ku noolyahay sida boqoolaal kale oo ay isku jinsiyad yihiin xaafad ay Soomaalidu ka degantahay magaalo dadka inta badan ay Afrikaan yihiin. Aabbihi wuxuu ku noolaa waddanka Maraykanka, halkaas oo uu ka hayay shaqo aan xirfad ahayn. Dhaqane iyo afar ka yar yar ba waxaa gacanta ku haysay Hooyadi oo ah haweenay aad u diin jecal, balse aan aqoon maaddi iyo mid diineed midna lahayn.
Dhaqane waxaa la geeyay dhawr iskuul oo ay gacanta ku hayeen dad aan muslimiin ahayn, balse hooyadi kuma qancin dhammaantood. Waxay raadisay meel muslimiin maamusho oo ay wiilka ku aaminto. Waxaa loo sheegay iskuul isku jir ah oo la yiraahdo imaamu Isxaaq ibnu Raahawayhi. Marka hooyadi maamulkii iskuulka la kulantay waxay u sheegeen in uu yahay waqaf oo ay muslimiin dhiseen, balse bishii laga rabo qadar lacageed oo aad u yar oo u dhikanta $67 doollarka maraykan ah. Sidoo kale waxay u sheegeen in ay diinta aad u xoojinayaan oo ardayga laga rabo in uusan imtixaanka ka hoosayn 10%. Haddii uu toban boqolkiiba ka hoos marana looga yeeridoono xaafiiska la socoshada waxbarashada aydayda, sidoo kalena Qur’aanka lagu xifdisiinayo muddo gaaban oo aan ka badnayn 15 sano gudohood. Iskuulku wuxuu caan ku yahay cadaadinta macallimiinta, si ay iyaguna u ciqaabaan ardayda oo aan loo tusin wax naxariisa, iyada oo dhanka kalena uusan waalidku ku lahayn wax ixtiraama, sidaas daraadeedna aysan filan wax ixtiraama, haddiiba wiilkii laga qabtay.
Marka hooyadii ay warbixintaas ku celisay wiilka aabbihi, wuxuu yiri “Inoo gee wiilka iskuulkaas, maadaama uu islaami yahay” sidaas ayaa dhaqane lagu qorey iskuulkaas. Dhammaadka sannad dugsiyeed kasta iskuulka waxaa lagu daraa ugu yaraan labo fasal, kuwaas oo kharashka ku baxaya laga uruuriyo waalidiinta iyo dadka wanaagga jecel ee Soomaalida ah. Gabanow wuxuu ku jiray dadka lacagaha iskuulka lagu ballaarinayo wax fiican ku dara, si uu uga qaybqaato dhismaha meesha Muslimiinta u dhaxaysa ee ay wax ku bartaan, maadaama uu shaqada adag oo uu qabto ay wax uga soo haraan, marka uu biilasha faraha badan oo laga sugayo kala diro, Hase yeeshee waxaa ku timid tii Alle.
Dhawr sano ka dib markii ay Dhaqane iyo walaalihi agoontoobeen, waxaa laga soo eryay iskuulkii. Hooyada dhaqane dhashay oo filaysay inay iskuulka wax ku leedahay ayaa maalintii dambe waxaa irridka ka soo istagay wiilkii iyo labo ka yar yar oo laga soo eryay Iskuulkii lacag baaqi loogu lahaa iyo midda bishaan oo 14 sii maraysa awgeed. Waxay u raacday iskuulkii, waxayna u tagtay xisaabiye ay aad isugu dhawyihiin ninka meesha masuulka ka ah oo ay muslimiintu xaruntaan waxbarasho bilowgeedii u dhiibeen, haddase isagu isa siiyey. Markii ay kala hadashay agoonka dhaqane ah iyo walaalihiis xaalkooda, wuxuu u sheegay inaysan meeshaan ka furnayn hadal aan lacag ahayn.
Xaafiiskii lacag qaadaha ayay bannaanka uga soo baxday hooyadii oo aad u murugaysan, waxayna telefoon u dirtay masuulkii guud.
Telefoonkeeda oo uu hayay ayuu uga jawaabay “Haye haye maxaad I waydiin doontaa?”
Hooyadaan oo aad u xishood badnayd waxay tiri “Ilmihii ayaa la iga soo cayriyey” balse isla markiiba wuxuu siiyey jawaab deg deg ah, isaga oo ugu soo gaabshay warka “Ilmahaan wax kuu baraynaaye la bax lacagtooda, annaga ha na wareerininee”
Dhaqane Gabanow iyo agoontii yar yarayd Waxay ku celisay gurigoodii, iyaga oo iskuulka laga cayriyey ee ay dib u sii fiirinayeen ku tirsanayay 3 fasal oo aabbohood dhisay intii uu noolaa.
Dhammaad. La soco Ayaan laawaha 2-aad iyo aabbihiis
W/Q: Cabdirisaaq Ismaaciil Xaashi (Cirro)